ကုန်ပစ္စည်း Tracking လုပ်မည်
Online / Merchant / B2B / Cooperate Registration
ချောစာ/ချောထုပ်၏ အခြေအနေအားစစ်ဆေးရန်အတွက် tracking code ဖြင့်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Best Partner for domestic last mile delivery services in Myanmar.
We are Domestics Professional
ကျွန်တော်တို့ SBS Delivery မှချောထုပ်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် တိကျမြန်ဆန်စွာဖြင့် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Express Courier Service for Corporates, Offices and Association
SBS Express service မှ လူကြီးမင်းတို့ ရုံးကိစ္စများအတွက် အရေးကြီးပို့ဆောင်ရန်ရှိသော စာ/ပါဆယ်များကို ရန်ကုန်မြိုံတွင်းသာမက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မြို့ပေါင်း ၁၀၀ကျော်သို့အိမ်တိုင်ရာရောက်အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
SBS last mile delivery Service ( အမြန်ချောပို့​)
E-commerce site များ၊ Online ရောင်းချသောသူများအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော Last Mile Delivery service အား လူကြီးမင်းတို့အတွက်တာ၀န်ယူပါရစေ။ လူကြီးမင်းတို့၏online shop တွင်ရောင်းချသော ပစ္စည်းများကို ၀ယ်သူသော မြန်မာပြည်အနှံ့ ရှိသင်၏ဖောက်သည်များထံသို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်မြို့ပေါင်း ၁၀၀ကျော်သို့ အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
SBS Repair and Return Delivery Services ( Mobile, computers and electronic devices)
SBS express service မှ လူကြီးမင်းတို့ ထံမှ ၀ယ်ယူထားသော customer များမှ ပြုပြင်ရန်ရှိသောပစ္စည်းမျာကို ယူဆောင်၍​လူကြီးမင်းတို့ Service Centre သို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ပြုပြင်ပြီးသော ပစ္စည်းများကို customer ထံပြန်လည်ပို့ဆောင်မှု့ပေးသော၀န်ဆောင်မှု့ဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Mobile Application များ
SBS Application ကို အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို ခံစားလိုက်ပါ။
ပို့ဆောင်သောပစ္စည်းများ၏ တည်နေရာနှင့်အခြေအနေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သိရှိနိုင်ခြင်း
လစဥ် Report ကြည့်နိုင်ခြင်း
မိမိ၏ ပို့ဆောင်မှုမှတ်တမ်း၊ ငွေမှတ်တမ်းများ ကြည့်နိုင်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့ SBS Delivery မှ လက်ရှိ မြို့နယ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Yangon( Cities Area & Industrial Zones)
Mandalay( Cities Area & Industrial Zones )
Kyaukpadaung( ကျောက်ပန်းတောင်း )
Kyaukse( ကျောက်ဆည် )
Lewe( လယ်ဝေး )
Meiktila( မိတ္ထီလာ )
Mogoke( မိုးကုတ် )
Myingyan( မြင်းခြံ )
Nyaung U( ညောင်ဦး )
Pyinmana( ပျဉ်းမနား )
Pyinoolwin( ပြင်ဦးလွင် )
Pyawbwe( ပျော်ဘွယ် )
Yamethin( ရမည်းသင်း )
Naypyitaw( နေပြည်တော် )
Bhamo( ဗန်းမော် )
Mohnyin( မိုးညှင်း )
Myitkyina( မြစ်ကြီးနား )
Bago( ပဲခူး )
Nyaunglepin( ညောင်လေးပင် )
Phyu( ဖြူး )
Taungoo( တောင်ငူ )
Gyobingauk( ကြို့ပင်ကောက် )
Letpadan( လက်ပံတန်း )
Nattalin (နတ်တလင်း )
Tharyarwady ( သာယာဝတီ )
Pyay( ပြည် )
Shwetaung( ရွှေတောင် )
Loikaw( လွိုင်ကော် )
Hpa-An( ဘားအံ )
Myawaddy( မြဝတီ )
Dawei( ထားဝယ် )
Kawthoung( ကော့သောင်း )
Myeik( မြိတ် )
Thayetchaung( သရက်ချောင်း )
Launglon( လောင်းလုံ )
SHAN STATE( EAST )
Kengtung( ကျိုင်းတုံ )
Tachileik( တာချီလိတ် )
Bogale( ဘိုကလေး )
Kyaikto( ကျိုက်ထို )
Mawlamyaine( မော်လမြိုင် )
Mudone( မုဒုံ )
Thanbyuzayat( သံဖြူဇရပ် )
Thaton( သထုံ )
Ye( ရေး )
Sittwe( စစ် ထွေ)
Kyaunk phyu( ကျောက်ဖြူ)
Taungup( တောင်ကုတ် )
SHAN STATE( NORTH )
Hsipaw( သီပေါ )
Kyaukme( ကျောက်မဲ )
Lashio( လားရှိုး )
Muse( မူဆယ် )
Aung Lan( အောင်လံ )
Gangaw( ဂန့်ဂေါ )
Magwe( မကွေး )
Minbu( မင်းဘူး )
Salin( စလင်း )
Pakokku( ပခုက္ကူ )
Seikphyu( ဆိတ်ဖြူ )
Taungdwingyi( တောင်တွင်းကြီး )
Yenangyaung( ရေနံချောင်း )
Monywa( မုံရွာ )
Kale( ကလေး )
Katha( ကသာ )
Kanbalu( ကန့်ဘလူ )
Kyunhla( ကျွန်းလှ )
Shwebo( ရွှေဘို )
Khin U( ခင်ဦး )
Ye U( ရေဦး )
Tabayin( ဒီပဲယင်း )
SHAN STATE( SOUTH )
Hopong( ဟိုပုန်း )
Kalaw( ကလော )
Taunggyi( တောင်ကြီး )
Nyaungshwe( ညောင်ရွှေ )
Loilen( လွယ်လင် )
Ywar ngan( ရွာငံ )
SBS Delivery နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစလို့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို
သုံးစွဲသူတွေဆီ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက်
Asia Technology Co.,Ltd
SBS is one of the leading express delivery and last mile delivery company since 2001. SBS can deliver over 120 cities of Myanmar.
P15-P16 , Thiri Yadanar Wholesale Market Compound , Thudhama Road , North Oakalarpa Township, Yangon . Myanmar.
Phone: +95 9442442112~4
© 2020 SBS Express Co.,Ltd